Gabadhyahay xariiftinimadaan adeegso si seygaagu kuugu raaxeeyo Gogosha | shumis.net
Home » galmada » Gabadhyahay xariiftinimadaan adeegso si seygaagu kuugu raaxeeyo Gogosha
Bani aadamku waxa uu markasta u baahan yahay in uu wax ka barto si uu horu Mar uga gaaro arimo badan oo khuseeya noloshiisa. Marka ay tahay xiriirka ka dhexeeya lamaanahya ayaa waxa uu u baahan yahay in markasta hore loo mariyo.
Faa'idada ku jirta dareenka aad ku tustay shumiska iyo salaaxida ayaa waxa ay kuu arkaysaa in aad tahay mid markasta xaaskaaga raba oo jecel. Halkaasna waxa aad ka arkaysaa natiijada ka soo bixi doonta.
Title: Gabadhyahay xariiftinimadaan adeegso si seygaagu kuugu raaxeeyo Gogosha
Posted by Unknown, Published at July 18, 2016 and have 0 comments